China Adenium Obesum Desert Rose anyaduru Adenium ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Anwụ na-acha Ifuru
Adenium Obesum Desert Rose dọwara Adenium
Adenium obesum (Desert rose) yiri obere opi, bilie uhie, mara ezigbo mma. Ngwurugwu dị na ụyọkọ atọ ruo ise, na-egbukepụ egbukepụ ma na-eto eto n'oge oge niile. Akpọrọ aha ọzara aha ya site na nso ọzara na uhie dị ka rose. Mee rue Disemba bu oge okooko nke Desert Rose. E nwere ọtụtụ agba nke okooko osisi, ọcha, ọbara ọbara, pink, ọla edo, agba abụọ, wdg.
1 - 10 afọ
0,5 afọ -1 afọ seedlings / 1-2 afọ osisi / 3-4 afọ osisi / 5 afọ n'elu nnukwu bonsai
Agba: Red, dard red, pink, ọcha, wdg.
:Dị: Adenium graft plant or Non graft plant
Osisi na ite ma ọ bụ Iferi Root, juru na Carton / Wooden Crates
Site n'ikuku ma ọ bụ n'oké osimiri n'ime akpa RF
Kwụ Tergwọ Okwu:
Adenium obesum nwere mmasị dị elu dị elu, ụkọ mmiri ozuzo, na ihu igwe anwụ, na-enwe mmasị n'ụba nke calcium, nke rụrụ arụ, nke na-eku ume, nke na-adịghị ọcha nke ndo, na-anabataghị ndò, na-ezere nsị mmiri, na-ezere fatịlaịza dị arọ na njikọta spam, na-atụ egwu oyi, ma na-eto na ọnọdụ kwesịrị ekwesị 25-30 Celsius.
N'oge ọkọchị, enwere ike itinye ya n'èzí na anwụ na-acha, na-enweghị shading, na mmiri zuru ezu iji mee ka ala mmiri dị mmiri mmiri, ma ọ bụghị ịgbakọta mmiri. Shouldgbara kwesịrị ịchịkwa ke ini etuep, na overwintering okpomọkụ kwesịrị aka iso n'elu 10 ... na-eme ka ndị dara epupụta jụụ. Mgbe a na-akọ ihe ubi, tinye fatịlaịza na-edozi ahụ ugboro abụọ ruo ugboro atọ n’afọ dị ka o kwesịrị.
Maka mmeputakwa, họta alaka ndị gbara afọ 1 rue 10 cm n’oké ọkọchị ma bepụ ha n’ime akwa aja mgbe ịkpụchara ntakịrị. Enwere ike iwere mgbọrọgwụ n'ime izu atọ na anọ. Enwere ike ịmegharị ya site na akwa dị elu n'oge okpomọkụ. Ọ bụrụ na ịnakọta mkpụrụ, enwere ike ịgha mkpụrụ na mgbasa.
Nke gara aga: Osisi China Taro Alocasia Macrorrhiza Maka Dechọ Mma
Osote: Bougainvillea Bonsai Okooko Osisi